Corona mampihena ny fankamamiantsika lasantsy | Apg29
Petrol dia 30 cents ny vidiny mora kokoa amin'izao fotoana izao.
Inona no mahatonga ny lehibe indrindra fidarohana ny corona dia, afa-tsy ny olona sasany izay marary maty, dia ny toe-karena no nalemy. Nefa ratsy ho an'ny firenena ara-toekarena, dia mahakasika antsika ary koa any Soeda.
Virus korontana manerana izao tontolo izao dia mihena ny vidin'ny solika . Raha tsy izany, mety misy mieritreritra fa hanana ny mifanohitra amin'izany, izay tsy ny raharaha.
Rehefa feno ny amin'izao fotoana izao eo amin'ny tobin-tsolika iray unmanned, dia nahazo bebe kokoa solika ny fiara noho ny vola, satria ny vidin'ny iray litatra amin'ny lasantsy mora lasa.
Androany, Zoma, February 28, nampidina ny vidin'ny lasantsy amin'ny alalan'ny 30 cents ny iray litatra ho SEK 15.05 tao amin'ny toby nisian'ny araka ny fanolorana. Ny diesel dia 25 cents ny mora vidy kokoa, ary ankehitriny vidin'ny SEK 15:53.
Kely mora vidy kokoa
Hatramin'ny Janoary, solika sy ny solika na ho momba ny Dime mora.
Vidin'ny solika eo amin'ny tsena amin'izao tontolo izao dia efa tamin'ny herinandro fihenana ny efa ho folo dolara ho 50 dolara ny barika ny Ranomasina Avaratra menaka.
Ny toe-karena dia nalemy
Efa teo aloha sady niteny sady nosoratana momba ny Coronavirus sy ny fihevitro momba izany. Ny fandinihana ny zavatra rehetra dia Hitako ho tena hafahafa. Inona no mahatonga ny lehibe indrindra fidarohana ny corona dia, afa-tsy ny olona sasany izay marary maty, dia ny toe-karena no nalemy. Nefa ratsy ho an'ny firenena ara-toekarena, dia mahakasika antsika ary koa any Soeda.
Isika rehetra dia mila an'i Jesosy, ary tsy mbola nandray an'i Jesosy, Manoro hevitra anareo aho mba hanao izany izao dieny mbola tsy tara loatra!